September 2009 ~ ဒီမိုဝေယံ
အဓမ္မတရားများဖယ်ရှားပြီး ဓမ္မအစားထိုးရေးလမ်းစဉ် ။..။
အဓမ္မတရားများဖယ်ရှားပြီး ဓမ္မအစားထိုးရေးလမ်းစဉ် စတင်လှုပ်ရှားပြီ။...။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေ့ အခမ်းအနား ဓာတ်ပုံများ။..။(ဂျပန်နိုင်ငံ)
ဖိနပ်ပျံနှင့် ဥာဏ်ဝင်း(ခ)ဖိနပ် မိတ်ဆက်ပွဲ။။..။(VOA သတင်း)
စစ်အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်(ခ)စိန်ဒရဲလား တို့အဖွဲ့ ဘိနပ်စာမိခြင်း။
နောက်ထပ် ထပ်ကြည့်ချင်သေးရင် ကိုမိုးသီးဘလော့ http://komoethee.blogspot.com/ မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်...။
ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားနှင့်လူငယ်များ အစည်းအရုံး ကြေငြာချက်။...။
ဖိနပ်ပျံဖြင့် အမေရိကားသို့ ရောက်လာကြသူနှစ်ဦး။...။(ကိုမိုးသီးဘလော့မှ)
သိန်းစိန် နဲ့ဥာဏ်ဝင်း ကို ဒီနေ့ နယူးယောက်ရှိ မြန်မာ များ က ဖိနပ်များနဲ့ ပေါက်ပြီး ဆန္ဒပြလိုက်ကြပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်နဲ့ အဖွဲ့ ဟာ နယူးယောက်မြို့၃၉ လမ်း East Gate Hotel မှာ တည်းခို ကြတယ်။ ဆန္ဒပြတဲ့အင်အားစုများက နံနက် စောစော ၇ နာရီ မှာ ဟော်တယ်ရှေ့ ကိုရောက်ကြတယ်။ တနင်္လာနေ့ ဖြစ်တာကတကြောင်း ၊ နံနက်လင်းအားကြီး ဖြစ်နေတာတကြောင်းကြောင့်လူ ၂၀ ခန့် သာလာ နိုင်ပါတယ်။ သူတို့နောက်လိုက်များ၊ သံတမန်လုံခြုံရေးများ၊ ရဲများကဆန္ဒပြ အင်အားထက် ပိုမိုများနေပါတယ်။ နံနက် ၈ နာရီခန့့် မှာ ဥာဏ်ဝင်းနဲ့ အဖွဲ့ က ကားနှစ်စီးနဲ့ ထွက်လာတယ်။
ဟော်တယ်အပြင်ဖက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ကိုမိုးသီးနဲ့ ၃ ယောက်က ဖိနပ်နှင့်ဝိုင်းပေါက် လိုက်တဲ့အခါမှာ တိုက်ပွဲစလိုက်ပါတယ်။ Mr Creator က ကော်ဖီခွက်နဲ့ ဥာဏ်ဝင်းကို လှမ်းပက်လိုက်ပါတယ်။ အနီးကပ် ပြစ်ခတ်ကြတာဖြစ်တယ်။
ဥာဏ်ဝင်း လန့် ပြီး ကားထဲကိုငုံရှောင်တယ်။ သူ့လူများက လက်နဲ့ ဝိုင်းကာ ကြတယ်။ ကားကို အတင်းမောင်းပြေးတယ်။
သံဃာနှစ်ပါးနှင့် မမေစန္ဒာစိုးညွန့် ၊ မစိုးစိုးဝင်းတို့ က လူသတ်သမားများ၊ သူခိုးများ လို့ အော်ဟစ် ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ သူတို့ ကြောက်အားလှန့် အားဖြစ်ပြီး ကားမောင်းပြေးပါတယ်။ သိန်းစိန် ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ သိန်းစိန်ကားက ကားလမ်းကို ပြောင်းပြန်မောင်းပြီးပြေးပါတယ်။ ဆန္ဒပြသမားများက ရဲများကို Ticket ပေး၊ Ticket ပေးလို့ ဝိုင်းအော်ပေးလိုက်ကြတယ်။ သိန်းစိန် ကားခေါင်းခန်းက ပါသွားတာကိုတွေ့ လိုက်ရတယ်။ ပြောင်နေတဲ့နဖူးကို ပတ်ဖို့ ထားတဲ့နောက်စေ့က ဆံပင်ကျို့ တို့ ကျဲတဲမှာ အခွေ လိုက်ပြုတ်ကြသွားတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။
ဖိနပ်နဲ့ ပေါက်သူများကို ရဲကလာဖမ်းတယ်။ ရုမ်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဖိနပ်နဲ့ ပေါက်သူများထဲမှာ တယောက်ကိုသာရဲ ကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုသူမှာလည်း ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မိမိဖက်မှာ အကျအဆုံးမရှိပါ။ လူနည်းသော်လည်းညီညီညာညာ တိုက်ပွဲဝင်နိင်သဖြင့် အကျိုးအမြတ်ကြီးလှပါတယ်။
ဗွီအိုအေမှာ သတင်းထောက်နစ်ဦးက လာရောက်မှတ်တမ်းတင်ဗွီဒီယိုရိုက်ပါတယ်။ Mizzima သတင်းဌာနမှာ တယ်လီဖုန်းဖြင့် သတင်းရယူပါတယ်။ အာအက်ဖ်အေမှသတင်းထောက်များကိုမတွေ့ ပါ ။ တယ်လီဖုန်းဖြင့်လည်း ဆက်သွယ်ခြင်းမပြုကြပါ။ ဘီဘီစီ ကတော့ နိင်ငံရေးသုတေသီများ၊ပညာရှင်များ ရဲ့ မိန့် ဆိုချက်များမှလွဲ ပြီး ဒီလိုသတင်းမျိုးကို လွှင့်ထုတ်လေ့ မရှိကြောင်းတွေ့ ရပါတယ်။
ဒီနေ့ ညနေ ၄ နာရီမှာ လည်းကောင်းတို့ တည်းခိုရာဟော်တယ်ရှေ့ မှာဆက်လက် ဆန္ဒပြဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကြီး (၂) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆန္ဒပြသပွဲ နှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ( ကိုရီးယား )
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်ခြင်း ( ၂၁ ) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ( ကိုရီးယား )
ပေးပို့လာသူ... http://www.flyingpeacock.blogspot.com/ ပျံသန်းနေသောခွပ်ဒေါင်းတကောင်။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နအဖ ဥက္ကဋ္ဌ ထံပေးစာ။ ...။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နအဖ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေထံ Sanction ရုပ်သိမ်းရေးအကြုံပြုပေးစာ။ ထိုအကြံပြုချက်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နအဖ ဥက္ကဋ္ဌ ထံပထမဦးဆုံး ပေးအပ်သော စာလည်းဖြစ်ပါသည်။..။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ၂၁ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ဓာတ်ပုံများ(ရွှေဂုံတိုင်အဖွဲ့ချုပ်ရုံး)။...။
ပေးပို့လာသူ ကိုဗိုက်ပူ။..။(Baik Pu)
အထက်ဗမာပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ လှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံတွေပါ။..။
၁။ အောင်ဆန်းကွင်းရှေ့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် အထက(၄)ကျောင်းအုပ်နံရံ။
၂။ မင်္ဂလာဈေးဘေးရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဆိုင်အနီးရှိဓါတ်မီးတိုင် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ဗမာပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ လှုပ်ရှားမှုတွေပါ မျှဝေပါတယ်။...။
Upper Burma Students Thetmaga
မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား၊ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမ အပေါင်းတို့မှ သံဃာ့တော်အရှင်သူမြတ်များအား ရိုသေစွာလျောက်ထားချက်။...။
ညီငယ် ခမိခဆဲ ပေးပို့သည်။..။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ၂၁နှစ်ပြည့်နှင့် CRPP ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ၁၁နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ဓာတ်ပုံ။...။
ဂျပန်နိုင်ငံ UN ရုံးရှေ့၌ ပြုလုပ်သော ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီး နှင့် နာဂအိခန်းဂျိ အသတ်ခံရမှု ၂နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း(၂)။...။
ဂျပန်နိုင်ငံ UN ရုံးရှေ့၌ ပြုလုပ်သော ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီး နှင့် နာဂအိခန်းဂျိ အသတ်ခံရမှု ၂နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း။...။
စက်တင်ဘာ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု ၂ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် ဆန္ဒပြပွဲ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ၂။(အိန္ဒိယ)
၂၅ရက်နေ့ မိုးမခသတင်းပါ မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သတ်၍ အရှင်ထာဝရမှ ရှင်းလင်းချက်။
Burma needs true democracy notajunta-sponsored sham(The Nation သတင်းစာပါ ဆရာတော်ဦးဣဿရိယ ဆောင်းပါး)
Burma needs true democracy notajunta-sponsored sham
By ASHIN ISSARIYA
WHEN THE MILITARY regime closed schools after the 1988 democratic uprising, I had few options other than to becomeamonk. I eagerly wanted to gain an education inasociety plagued with the darkness of ignorance. Beingamonk has helped me to better understand and see the reality of life for the people of Burma.
In order to maintain control, the military authorities use coercion, fear and poverty to strip people of their choices. The main decision the majority of people in my country are left with is how to survive day to day. As long as there isaregime that places its own power and profits over the lives of people, myself, other monks and civilians are left with no other option than to utilise our inner strength and continually work for peaceful change.
People often turn to monks for spiritual and physical service, and in return monks are reliant on the alms of the people to sustain our life and work. We are linked together, and when people are too afraid to express their sorrow and needs to the local authorities they often turn to monasteries.
The military regime tells monks and nuns to not get involved in politics, but in our eyes politics concerns all people and not just politicians and big generals. In September 2007, I marched with hundreds of thousands of monks and civilians through the streets of Burma, as part of our duty to end suffering. Our demands were clear and focused on bringing peace and reconciliation to the country.
Though the military tried to cruelly crush the Saffron Revolution, Burma will never be same again. The images of soldiers shooting monks will never be forgotten. The regime's lies were revealed andanew generation of activists was born. Brutality can quiet some people using fear, while others will respond with greater resolve for peace.
There are two distinctly visible and different forces working for peace and stability in Burma.
As the monks marched they chanted the prayer of the Metta Sutra, the prayer for universal love and kindness. Like many other people we wantatruly democratic government, one that fully respects the rights of people. This sort of government is attainable in Burma and I hold out firmly foranational system built through cooperation, trust and dialogue.
The military regime, wrongly named the State Peace and Development Council, believes that peace means maintaining complete control - with nobody questioning, thinking or hoping. Totalitarian control is notanecessary evil in order to keep the country together, but it is an evil that is unnecessarily breaking the country apart.
The people of Burma do not want to wait any longer for democracy. The election the military regime is pushing for in 2010 has already been arranged for the people to lose. The military wrote the constitution and they will write the names of the election winners. If the people of Burma accept this then it givesafree ticket for the Burmese generals to stay in power, just in different uniforms. We do not want the farce of governance to continue and we are ready to continue our efforts with undaunted strength.
Many people around the world have spoken out for genuine progression to happen in Burma, joining with the diverse and united voices of Burma's democratic and ethnic leaders.
The benchmarks are clear as to what must happen to have true reconciliation and peace in Burma. All political prisoners must be released, including Aung San Suu Kyi and many of my friends and colleagues who are among the 200 monks and nuns currently enduring imprisonment.
There also must be political dialogue in the country.
If Burma is going to becomeapeaceful country there must be cooperation between peoples and parties or else the result could be more conflict. Many others and I are ready for the discord to end.
I implore the humanity of the international community, to recognise the connection they share with the people of Burma as fellow humans. We all holdastrong responsibility to one another, to wisely use our compassion to protect each other from fear and suffering.
I also implore people to recognise the global benefits ofatruly peaceful Burma. It is absolutely necessary for the international community to move beyond just voicing their concern, and follow their words with concrete actions.
Peace must happen in Burma at some point, and the time is now to achieve it and endure decades of false democracy to reach our goal.
The Nation သတင်းစာပါ ဆရာတော် ဦးဣဿရိယ ဆောင်းပါး။..။
ရန်ကုန်မြို့ နယ်အချို့ ၌ သံဃာ့သွေး မြေကျခဲ့ရခြင်း နှစ်ပတ်လည် လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်။..။
သံဃာ့သွေး မြေကျခဲ့ရခြင်း နှစ်ပတ်လည် လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ် (ရန်ကုန်)
စစ်အစိုးရ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားသည့်ကြားမှ ယနေ့ (26.9.09) စနေနေ့ နံနက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့ နယ်အချို့ ၌ ကျောင်းသားလူငယ်များမှ စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကို(2007)မျိုးဆက်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကျောင်းသားများနှင့် အခြားတော်လှန်ရေးအင်အားစုများ ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လှုပ်ရှားမှု၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ........
လှုပ်ရှားမှုကိုလသာ၊ကျောက်တံတား၊ဗိုလ်တထောင်၊သာကေတ ၊ဒေါပုံ၊ တာမွေ၊ကျောက်မြောင်း၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ တောင်ဥက္ကလာ၊မြောက်ဥက္ကလာ မြို့နယ်များ၏ အဓိကလမ်းမကြီးများနှင့်ကားမှတ်တိုင်များတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လအတွင်းကလည်း အဆိုပါအင်အားစုများက ရန်ကုန်တိုင်းသန်လျင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီကျောင်း စာသင်တိုက်များသို့ သံဃာ့ သမဂ္ဂီ၏ ကံဆောင်ပွဲကြေငြာချက်များကိုဖြန့်ချီခဲ့ကြောင်း လည်းသိရသည်။
မေးလ်ထဲပေးပို့ လာသူအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။...။
စက်တင်ဘာ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု ၂ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် ဆန္ဒပြပွဲ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း (အိန္ဒိယ) ။...။
ဥဒါန်း ဘယ်ခါ ကြေအံ့နည်း။..။(၂နှစ်ပြည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အမှတ်တယ) ကိုစိုး(နာဂါစကီ)
ဥဒါန်း ဘယ်ခါ ကြေအံ့နည်း။..။
၂နှစ်မြောက် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အမှတ်တယ။
" ဝ " တိုင်းရင်သားတို့၏ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော် ဓါတ်ပုံများ။....။
"ဝ " တိုင်းရင်းသားတို့ နေထိုင်ရာ မြို့တော်၊ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ ဓလေ့ထုံးစံ ၊ဓာတ်ပုံများကို ပေးပို့လာတဲ့အတွက် ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ SANCTION နှင့်ပတ်သတ်၍ စဉ်းစားထားသည့် အချက်များ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးထံ စာပေးပို့မည်။..။
၁၉၉၅ခုနှစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း တွေ့ဆုံစဉ်
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ Sanction နှင့်ပတ်သတ်၍ စဉ်းစားထားသည့် အချက်များအား ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေထံ စာပေးပို့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဒီကနေ့ နေ့လည်၂နာရီမှ ၃နာရီအထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေလည်းဖြစ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။
...ဒီကနေ့ အန်ကယ် နေ့လည် ၂နာရီကနေ ၃နာရီ အထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ...တွေ့ဆုံခဲ့တာတော့ အန်ကယ်တဦးထဲပါ။...စာကြမ်း၂ခု ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ ပထမတခုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက် (၈)ချက်ထဲက မရှင်းလင်းတာတွေ၊ အယူအဆ လွဲနိုင်တာတွေ၊ အဓိပ္ပါယ်နှစ်ခွဖြစ်နေတာ တွေကိုရေးပြီးတော့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန ကိုတင်ဖို့ပါ။ ..
....ဒုတိယစာကြမ်းကတော့ ...မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် Sanction ချမှတ်ထားတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကသုံးသပ် စဉ်းစားထားတဲ့ စာကို ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေကို ပေးပို့ဖို့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လတ်မှတ်ရေးထိုး ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာပါအကြောင်းအရာကို အခုအချိန်မှာ ပြောလို့မရ သေးပါဘူး။ ပေးပို့ပြီးတဲ့ အခါမှ ပြောပြနိုင်ပါမယ်။ ဒီစာဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေဆီကို ပေးပို့တဲ့ ပထမဦးဆုံး စာလည်းဖြစ်ပါတယ်။....ဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေလည်းဖြစ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သတ်၍ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းများ မှားယွင်းဖော်ပြမိပါက ကျွန်ုပ်၏ ချို့ယွင်းမှုသာ ဖြစ်ပါကြောင်း......
တရုတ်စီးပွားရေးသမားများ အထူးဒေသများမှနေ၍ တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာလျက်ရှိ။..။
ဆောင်းပါး နှင့်ဓာတ်ပုံများပေးပို့လာသူ ကိုဝေခမ်း။..။
အကျယ်ချဲ့ကြည့်လိုလျှင် ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှ Full Screen ကိုနှိပ်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် SANCTION နှင့်ပတ်သတ်၍ စဉ်းစားထားသည့် အချက်များ အာဏာပိုင်များကို တင်ပြမည်။..။
ဒီနေ့ နေ့လည်၂နာရီမှ ၄နာရီအထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အကျိုးဆောင်ရှေ့နေများ တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေလည်းဖြစ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။
....ဒီနေ့အန်ကယ် တို့နေ့လည်၂နာရီကနေ ၄နာရီအထိ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ အောက်တိုဘာ ၂ရက်နေ့မှာ ချမှတ်မယ့် အယူခံကိစ္စတွေ... ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအမိန့်ချမှတ်မယ် မသိပေမယ့် ချမှတ်မယ့် အမိန့်တွေကို ...ရင်ဆိုင်ပါမယ်။..
....နောက်တချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက် (၈)ချက်ထဲမှာ အဓိပ္ပါယ်၂မျိုး ထွက်နေတာတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိတာတွေကို.... သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို တင်ပြဖို့အတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။...
...နောက်တခုကတော့ မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီအသစ်.... နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ဖြစ်တဲ့ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုနဲ့ ပိုမိုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ....ဆိုတဲ့အချက်တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ခံတယ်လို့ ပြောပါတယ်။.... ဒါပေမယ့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ဆိုတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အစိုးရရော၊ အတိုက်အခံနဲ့ရော ထိတွေ့ ဆက်ဆံဖို့လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
.... နောက်ဆုံးတခုကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာပြည်မှာ ပိတ်ဆို့မှုတွေ(SANCTION) ပတ်သတ်ပြီး ပယ်ဖျက်အောင်စဉ်းစားထားတဲ့ အချက်တွေကို အာဏာပိုင်များကို တင်ပြသွားမယ် ပြောပါတယ်။
...ဘယ်လို SANCTION တွေလဲ၊ ပြည်သူတွေ ထိခိုက်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ထိ ရှိတယ်၊ SANCTION ချမှတ်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအစိုးရရဲ့ သဘောထား စတာတွေကို သိရှိဖို့လိုတယ် ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဏာပိုင်တွေကို တင်ပြမယ့် စဉ်းစားထားတဲ့ အချက်တွေကို စာရေးတင်ပြဖို့ အန်ကယ်တို့ကို မှာလိုက်ပါတယ်။ အခုအချိန်တော့ မပြောပြနိုင်သေးပါဘူး ။ ရက်ပိုင်းအတွင်း အမြန်ဆုံး တင်ပြနိုင်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ တင်ပြပြီးရင် ပြောပြနိုင်ပါမယ်။...
...ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ....PRESSURE ကျတာကတော့ မကြာမကြာ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အစားအသောက်လည်း အဆင်ပြေတယ် ပြောပါတယ်။..ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က အကျိုးဆောင်ရှေ့နေများမှ အယူခံအမိန့် မချမီ ပြင်ဆင်စရာ တွေပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ယနေ့ နေ့လည်မှာ တွေခွင့် ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။...။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ NLD ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်။..။
ပုံကြီချဲ့ကြည့်ရန် Click နှိပ်ပါ။..။
စစ်အစိုး၏ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်မည်ဟု ပြောဆိုနေသည့် ၄၃ဦးစာရင်း။...။
1. ဦးကိုကို 064-50410 / 09-2165036
2. ဦးကိုကိုနိုင် 01-580480
3. ဦးကျော်စိုးလင်း 01-244924
4. ဦးခင်မောင်ထွေး တဆင့် 064-24751
5. ဦးစိုးကြွယ် တဆင့် 01-629463
6. ဦးညိုမင်းလွင် 01-578503
7. ဦးညွန့်မောင် 01-244924
8. ဦးဌေးဝင်း တဆင့် 01-710553
9. ဦးတင်မောင်အေး 01-243633 / 09-5073452
10. ဦးတင်လှ တဆင့် 01-593259
11. ဦးတင်ဟန် တဆင့် 064-24751
12. ဒေါ်နန်းရွှေကြာ တဆင့် 02-57618 / 02-57109
13. ဦးနေမျိုးဝေ 09-8610719
14. ဦးမျိုးခိုင် တဆင့် 01-611272 / 01-610083
15. ဦးမြင့်အောင် 01-645001
16. ဦးရဲမင်း တဆင့် 02-57618 / 02-57109
17. ဦးလှမြင့် 068-21398
18. ဦးဝင်းဇော် 064-24259 / 09-2201141
19. ဦးသန်းမင်းစိုး တဆင့် 01-291375
20. ဦးသန်းအေး တဆင့် 09-8590990
21. ဦးသိန်းတင်အောင် 01-682581
22. ဦးအုန်းလွင် 01-296693 / 09-5197648
23. ဦးအောင်ဘွား 01-296693 / 09-5197648
24. ဦးအောင်မျိုးဥိး 01-500610
25. ဦးအောင်သန်းတင့် တဆင့် 063-50642
26. ဦးကျော်မြင့် 09-5333193
27. ဦးသုဝေ 09-5084963
28. ဦးကြည်ဝင်း 01-637076
29. ဦးရဲထွန်း ( အငယ် ) 01-556554
30. ဦးသိန်းကြည် 063-50641
31. ဦးထွန်းအောင်ကျော် 01-504882 / 01-505307
32. ဦးလှသိန်း 01-504882
33. ဦးငြိမ်းမောင် 01-504882
34. ဦးရဲထွန်း ( အကြီး ) 09-5185511 / 01-538669
35. ဦးတင်ထွန်းမောင် 01-540987
36. ဦးဌေး 09-8534539
37. ဦးရွှေအုံး 01-510541 /01-510764
38. ဦးတင်အုံး တဆင့် 01-662461
39. ဦးတင်ဝင်း 045-48321
40. ဦးဘိုမောင်း တဆင့် 01-553869
41. ဦးမျိုးသန့် တဆင့် 09-6570445
42. ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း 09-5161173
43. ဦးတင်စိုး 01-504882
Mail ထဲကရတာပါ။ အများသိစေရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။...။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအားလုံး ချက်ချင်းလွတ်ပေးရန် တောင်းဆိုကြေငြာချက်။..။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအားလုံး ချက်ချင်းလွတ်ပေးရန် တောင်းဆိုကြေငြာချက်။..။ Eng
NEW YORK မှာကျင်းပတဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၂နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားနှင့် ကြေငြာချက်။...။
သာသနဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ချုပ် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်။..။
ရွှေဝါရောင် ၂နှစ်ပြည့် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ။(source peacerunning)
လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ။(source peacerunning)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်ရရန် အကျိုးဆောင် ရှေ့နေများတောင်းဆိုထား။...။
အောက်တိုဘာလ ၂ရက်နေ့တိုင်းတရားရုံးမှ အယူခံအမိန့်မချမှတ်မှီ အဆင်သင့်ပြင်ဆင် ထားနိုင်ရန် အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်ရရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနသို့ တောင်းဆိုထားကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တဦးဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
....အန်ကယ်တို့ ရှေ့နေအဖွဲ့ လာမည့် အောက်တိုဘာလ ၂ရက်နေ့မှာ.... ချမှတ်မယ့် အယူခံအမိန့် အပေါ် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့ အတွက်ရယ်...... နောက်တချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့.... စည်းကမ်းချက် ၈ချက်ထဲက မရှင်းလင်းတဲ့ ....ကိစ္စသက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေဆီ တင်ပြဖို့ပါ။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန ကိုတွေ့ခွင့်ရဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။.....
.....လွတ်မြောက်လာတဲ့ ...နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တွေထဲမှာ အန်ကယ် လက်ခံရရှိတဲ့ ...စာရင်းအရ...၁၁၉ဦးရှိပါတယ်.။ အဲ့ဒီအထဲမှာ NLD က ၃၉ဦးပါပါတယ်။ အကျဉ်းသား ၇၀၀၀ကျော်ထဲက လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဦးရေကိုတွက်ကြည့်ရင် နောက်ဆက်တွဲ ကျန်သေးတယ် ယူဆရပါတယ်။ အခု NLD ဗဟိုလူမှု အထောက်အကူပြု အဖွဲ့က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ဆေးကုသပေးတာတွေ၊ ငွေကြေး ထောက်ပံ့ပေးတာတွေ ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်.....ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တဦးဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၈ရက်နေ့က စစ်အစိုးရမှ အကျဉ်းသား ၇၁၁၄ဦးကို ပြန်လည်လွတ်ပေးမည် ဟုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထိုအထဲမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေ ၁၂၇ဦးစာရင်းကို AAPP (http://www.aappb.org/) မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းကျော်လွှားနိုင်ဖို့ နဲ့ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ အားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအာလုံး မလွှတ်ပဲနဲ့ ပြေလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသွားပါတယ်။..။
ပေါင်းစားလို့ ကောင်းစားနေတဲ့ ကောင်တွေလဲဒုနဲ့ဒေး။
ဒီငါတို့မြေ ဒီငါတို့ရေ ဒီနိုင်ငံအရေး
အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် ( မြန်မာနိုင်ငံ ) ကျင်းပသည့် နိုင်ငံကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ ဆွေးနွေးပွဲ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း(အိန္ဒိယ)။..။
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကြီး (၂)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားစာ။...။
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး ကြိုးပမ်းနေကြသူများ ခင်ဗျား
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အာဏာရှင်စနစ်ကို စွန့်စွန့်စားစား တိုက်ဖျက်ခဲ့ကြသည့် သမိုင်းဝင် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကြီး (၂)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားနှင့် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး၏ ကမ္ဘာကျော်ပြယုဂ်တခုဖြစ်သော ဂျပန်သတင်းထောက် နာဂါးအိ ခန်းဂျိ သတ်ဖြတ်ခံရမှု အောက်မေ့ဘွယ် အခမ်းအနားကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၍ တခဲနက် ပါဝင်လှုပ်ရှားကြပါရန် လေးစားစွာ နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
* နေရာ - တိုကျိုမြို့ ရှီဘူယ UN အဆောက်အဦရှေ့
* နေ့ရက် - ၂၇-၉-၂ဝဝ၉ (တနင်္ဂနွေနေ့)
* အချိန် - ညနေ (၃) နာရီမှ (၅) နာရီထိ
* မှတ်ချက် - အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံတို့၏ တာဝန်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ခေါင်းဆောင်များမှ အမှာစကား ပြောကြားခြင်း၊ ဘာသာပေါင်းစုံဖြင့် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်းနှင့် သရုပ်ပြပွဲ အစီအစဉ်များ ပါရှိပါမည်။
JAC – Information
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက်လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြပွဲ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း(၂)။..။
ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက်လမ်းလျှောက်ပွဲ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း။...။
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက်လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြပွဲ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း။..။
ယနေ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်မြို့တွင် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့မှ အရှင်သောပါကနှင့် သံဃာတပ်ပေါင်းစုမှ အရှင်ဣဿရိယ အပါအဝင် သံဃာတော်၁၅ပါး ဦးဆောင်ပြီး မြန်မာ၊ ထိုင်းရဟန်းတော်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၊ ထိုင်နိုင်ငံသားများ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး စိတ်ဝင်စားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ စုစုပေါင်း ၂၅၀ကျော်ခန့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက်လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးရ လွတ်မြောက်လာသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၂၆ဦးစာရင်း။...။
21 September 2009 12:45 Thailand Standard Time
At least 126 political prisoners released
The Assistance Association for Political Prisoners (Burma) (AAPP) can confirm that so far 126 political prisoners have been released from 24 different prisons in Burma.
The list of political prisoners released will be continually updated at our web site http://www.aappb.org/ as AAPP receives more information. In alphabetical order:
9. Aung Naing @ Ba Gyi Aung (Mandalay prison) – NLD member
10. Aung Naing Tun (Monywa prison) – Student
11. Aung Swe (Shwebo prison) - NLD member
12. Aung Tun (Tharawaddy prison) – student; member of the All Burma Federation of Student Unions
13. Aye Min (a) Aye Min Min (Tharawaddy prison) – private tutor
14. Aye Myint Mar (female) (Monywa prison) - All Burma Students Democratic Front (Western)
15. Ba Chit (Tharawaddy prison) – Ex-captain in the army
16. Ba Min (Kale prison) – NLD member
17. Bo Bo (Myingyan prison)
18. Bo Gyi (Pegu prison)
19. Chan Aung (Monywa prison) - NLD township organiser
20. Chit Thein Tun (Monywa prison) - All Burma Students Democratic Front (Western)
21. Cho Mar Htwe, (Female) (Moulmein prison) – NLD member
22. Ei (female) (Paungde prison)
23. Eimt Khaing Oo, Female (Insein prison) – journalist; Cyclone Nargis volunteer
24. Hla Shein, (Hinzada prison) , Human Rights Defenders and Promoters
25. Hlaing Aye (Kale prison) - NLD MP, Former Political Prisoner
26. Hnin Hnin (female) (Monywa prison) - All Burma Students Democratic Front (Western)
27. Htay (a) San San Myint, (Female) (Insein prison)
28. Htay Naing Lin (Monywa prison) - Human Rights Defenders and Promoters Network
29. Htay Win (Thayet prison) – NLD Township Organizer
30. Kay Thi Aung @ Ma Ei (female) (Mandalay prison)
31. Khaing Kaung Zan, (Thayet prison) – Arakan League for Democracy in exile member
32. Khin Khin Lay (a) Khin Lay, (Female) (Pegu prison) – NLD member
33. Khin Maung Chit (Meiktila prison) - NLD Local Secretary
34. Khin Maung Thein (Shwebo prison) – NLD member
35. Khin Moe Aye (a) Moe Moe (Female), (Myingyan prison) – 88 Generation Students member; former political prisoner
36. Kyaw Kyaw Thant (Insein prison) – journalist; Cyclone Nargis volunteer
37. Kyaw Lwin, (Hinzada prison) , Human Rights Defenders and Promoters
38. Kyaw Maung (Myitkyina prison) – NLD MP
39. Kyaw Thu Htike (Taunggyi prison)
40. Kyaw Win (Tharawaddy prison) – All Burma Students Democratic Front
41. Kyi Kyi Min, (Female) (Insein prison) – NLD member
42. Kyi Lin (Myintkyina prison) – NLD member
43. Maung Maung Htwe (Shwebo prison)
44. Maung Maung Twin (Mandalay prison)
45. Maw Si (Shwebo prison) – NLD Youth member
46. Mi Mi Sein, (Female) (Insein prison) – NLD Township Joint-Secretary
47. Mi Mi Swe (female) (Henzada prison)
48. Michael Win Kyaw (Kale prison) – 88 Generation Students member; former political prisoner
49. Min Min (a) La Min Tun, (Hinzada prison) , Human Rights Defenders and Promoters
50. Min Min Soe (Myingyan prison) – 88 Generation Students member
51. Moe Hlaing (Moulmein prison)
52. Moe Kyaw Thu (a) Bo Bo (Mandalay prison)
53. Moe Lwin (Moulmein prison) – individual activist
54. Monywar Aung Shin (a) U Aye Kyu (Insein prison) - Member of NLD and poet
55. Mya Sein, (Hinzada prison) , Human Rights Defenders and Promoters
56. Myint Oo (a) Ni Ni (Mandalay prison) – NLD Township organizer; former political prisoner
57. Myint Oo (Thayet prison) – NLD Township Joint Secretary
58. Myint, (Hinzada prison) , Human Rights Defenders and Promoters
59. Myo Min Lwin (Moulmein prison)
60. Myo Min Tun (Monywa prison) – Student
61. Myo Yan Naung Thein (Thandwe prison) – 88 Generation Students member, former political prisoner
62. Nay Win (Myintkyina prison) – NLD Township Organizer
63. Ni Ni May Myint (Buthidaung prison) - NLD Youth
64. Nine Nine (Insein prison) – NLD MP, Former Political Prisoner
65. Nu Nu Swe @ Pauk Pauk (female) (Myaungmya prison)
66. Nyi Nyi Min (Buthidaung prison) – NLD member
67. Nyo Mya (Kale prison) – NLD member
68. Pe Tin (Pegu prison) – NLD member
69. Peter (Loikaw prison)
70. Pyae Phyo Aung (a) Hnan Mue (Pa-An prison)
71. San Pwint (Kale prison) – NLD member; teacher
72. San Ya (Tharawaddy prison) – NLD member
73. Sandar Min (a) Shwee, (Myaungmya prison) – 88 Generation Students, Former Political Prisoner
74. Sandar, (Female) (Myingyan prison) – NLD member
75. Saw Myo Min Hlaing @ James (Thaton prison) - Private Tutor
76. Saw Oo Kyar (Mandalay prison)
77. Saw Taw Kyi (Thayet prison) – Karen National Union member
78. Shin Sandaw Batha, Monk (Insein prison) – All Burma Monks’ Alliance
79. Shwe Thar (a) Tin Win (Tharawaddy prison) – Karen National Union member
80. Soe Han (Lashio prison) – lawyer; Chair of the National League for Democracy’s (NLD) legal advisory body
81. Soe Moe Naing @ Ngone (Mandalay) – Democratic Party foraNew Society
82. Soe Wai (a) Than Zaw (Myitkyina prison)
83. Than Min (a) Tin Tun Aung, (Taungoo prison) – NLD member
84. Than Than Htay, (Female) (Insein prison) – student
85. Than Than Sint, (Female) (Insein prison)
86. Than Tun (Shwebo prison)
87. Than Tun Lay (Myingyan prison) – Individual activist
88. Than Zaw Oo (Tharawaddy prison) – NLD member
89. Thar Cho, (Thayet prison) – NLD Township Organizer
90. Thein Zaw (Tharawaddy prison)
91. Thet Oo (Taungoo prison) – Human Rights Defenders and Promoters member
92. Thet Zin (a) Maung Zin (Kale prison) – journalist; former political prisoner; member of the All Burma Federation of Student Unions and the Democratic Party foraNew Society
93. Thin Min Soe, (Female) (Insein prison) – labour activist
94. Thura Win @ Thura Lin (Buthidaung) – Student
95. Tin Mar Swe (female) (Mandalay prison)
96. Tin Maung Nyunt (Shwebo prison) – NLD Township Organiser
97. Tin Mya (Insein prison) - National League for Democracy Township chairperson, Former Political Prisoner
98. Tin Myint (Insein prison) – NLD member
99. Tin Myint (Tharawaddy prison)
100. Tin Myo Htut (a) Kyaw Oo (Insein prison) – Generation Wave; former political prisoner
101. Tin San (Monywa prison)
102. Tin Tin Myint, (Female) (Insein prison) – third year chemistry student
103. Tin Tun (a) Kyaw Swa (Tharawaddy prison) – UN Development Program staff (New Era journal distributor)
104. Tint San, (Monywa prison) - former political prisoner
105. Tun Hla (Tharawaddy prison)
106. Tun Min Aung (Kawthaung prison)
107. Tun Oo (a) Ngar Kalar (Taungoo prison)
108. Tun Tun Nyein, (Thayet prison) – NLD Youth member
109. Tun Tun Oo (a) Nanda Malar (Taungoo prison) – monk
110. Tun Tun Oo (Thandwe prison)
111. U Han Sein (Tharawaddy prison) – NLD member
112. U Pannita (a) Myint Aye (Taungoo prison) – monk; Human Rights Defenders and Promoters member
113. U Zawana (a) Soe Myint (Taungoo prison) - monk
114. Win, (Hinzada prison) , Human Rights Defenders and Promoters
115. Win Maw @ Tut Pe (Kale prison) - NLD member
116. Win Myint (Insein prison)
117. Wunna Soe (Pa-An prison) – Democratic Party foraNew Society member
118. Yan Aung Shwe (Thayet prison) – All Burma Students Democratic Front member
119. Yan Kyaw Soe @ Shwe Thway (Monywa prison) – NLD member
120. Yan Naing Min (a) Nan Wai (Mandalay prison) – student
121. Yar Zar @ Tun Lin Oo (Monywa prison) – NLD member
122. Zaw Htet Aung (Kale prison) - student
123. Zaw Lin Tun (a) Phu Zaw (Monywa prison) - All Burma Students Democratic Front (Western)
124. Zaw Tun (Taungoo prison)
125. Zin Hninn Aye @ Zin Mar (female) (Mandalay prison) - Second year chemistry student
126. Zin Mar Aung (female) (Mandalay prison) – student; NLD member
Source from http://www.aappb.org/
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တဖတ်သတ် တရားစွဲဆို ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်း ။
It Did Happen in Burma - Record on Trial of DASSK (Updated)
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် ကြေငြာချက်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျန်းမာရေး ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ပြန်လည်စစ်ဆေးခွင့်ရ။..။
ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို နှစ်ရှည်လများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ကပြန်လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခွင့်ရခဲ့ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တဦးဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
....ဒီနေ့နေ့လည်ပိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ....ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက ပြန်လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခွင့်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်....။ ...ညနေ၅နာရီလောက်က ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ အန်ကယ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေးတော့ ကောင်းပါတယ်။ ...ဒါပေမယ့် Pressure နည်းနည်းကျတယ်လို့... ပြောပါတယ်။.. အစားအသောက်ကြောင့် လို့ပြောပါတယ်။ ပို့ပေးတဲ့အစားအသောက်တွေမှာ အာဟာရဖြစ်စေဖို့နဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် နည်းစံနစ်ကျတဲ့ အစားအသောက်တွေဖြစ်ဖို့ လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ .. နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းပဲ ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခွင့် ရမရ ဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး။....ဟုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တဦးဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၁၁ရက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ပြန်လည်ကျခံရချိန်မှ စ၍အာဏာပိုင်များမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုပုံမှန် စစ်ဆေးပေးနေကျ ဆရာဝန်ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း အစား တခြားအမျိုးသမီးဆရာဝန် တဦးနဲ့အစားထိုး ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မိမိကို နှစ်ရှည်လများ ပုံမှန်ကျန်းမာရေးကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပေးခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ ပြန်လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခွင့်ပြုရန် အာဏာပိုင်များထံ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။....။
ဧရာဝတီသတင်းဋ္ဌာနပါ သတင်းအား မွန်ပြည်သစ်ပါတီဖြေရှင်းချက်။...။
ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၁၀စာရင်း။...။
20 September 2009 11:00 Thailand Standard Time
12. Aye Myint Mar (female) (Monywa prison) - All Burma Students Democratic Front (Western)
13. Ba Chit (Tharawaddy prison) – Ex-captain in the army
14. Ba Min (Kale prison) – NLD member
15. Bo Bo (Myingyan prison)
16. Bo Gyi (Pegu prison)
17. Chan Aung (Monywa prison) - NLD township organiser
18. Chit Thein Tun (Monywa prison) - All Burma Students Democratic Front (Western)
19. Cho Mar Htwe, (Female) (Moulmein prison) – NLD member
20. Eimt Khaing Oo, Female (Insein prison) – journalist; Cyclone Nargis volunteer
21. Hla Shein, (Hinzada prison) , Human Rights Defenders and Promoters
22. Hlaing Aye (Kale prison) - NLD MP, Former Political Prisoner
23. Hnin Hnin (female) (Monywa prison) - All Burma Students Democratic Front (Western)
24. Htay Naing Lin (Monywa prison) - Human Rights Defenders and Promoters Network
25. Htay Win (Thayet prison) – NLD Township Organizer
26. Khaing Kaung Zan, (Thayet prison) – Arakan League for Democracy in exile member
27. Khin Khin Lay (a) Khin Lay, (Female) (Pegu prison) – NLD member
28. Khin Maung Chit (Meiktila prison) - NLD Local Secretary
29. Khin Maung Thein (Shwebo prison) – NLD member
30. Khin Moe Aye (a) Moe Moe (Female), (Myingyan prison) – 88 Generation Students member; former political prisoner
31. Kyaw Kyaw Thant (Insein prison) – journalist; Cyclone Nargis volunteer
32. Kyaw Lwin, (Hinzada prison) , Human Rights Defenders and Promoters
33. Kyaw Maung (Myitkyina prison) – NLD MP
34. Kyaw Thu Htike (Taunggyi prison)
35. Kyaw Win (Tharawaddy prison) – All Burma Students Democratic Front
36. Kyi Kyi Min, (Female) (Insein prison) – NLD member
37. Kyi Lin (Myintkyina prison) – NLD member
38. Ma Ei (female) (Paungde prison)
39. Ma Htay (a) San San Myint, (Female) (Insein prison)
40. Ma Mi Mi Swe (female) (Henzada prison)
41. Maung Maung Htwe (Shwebo prison)
42. Maw Si (Shwebo prison) – NLD Youth member
43. Mi Mi Sein, (Female) (Insein prison) – NLD Township Joint-Secretary
44. Michael Win Kyaw (Kale prison) – 88 Generation Students member; former political prisoner
45. Min Min (a) La Min Tun, (Hinzada prison) , Human Rights Defenders and Promoters
46. Min Min Soe (Myingyan prison) – 88 Generation Students member
47. Moe Hlaing (Moulmein prison)
48. Moe Kyaw Thu (a) Bo Bo (Mandalay prison)
49. Moe Lwin (Moulmein prison) – individual activist
50. Monywar Aung Shin (a) U Aye Kyu (Insein prison) - Member of NLD and poet
51. Mya Sein, (Hinzada prison) , Human Rights Defenders and Promoters
52. Myint Oo (a) Ni Ni (Mandalay prison) – NLD Township organizer; former political prisoner
53. Myint Oo (Thayet prison) – NLD Township Joint Secretary
54. Myo Min Lwin (Moulmein prison)
55. Myo Yan Naung Thein (Thandwe prison) – 88 Generation Students member, former political prisoner
56. Nay Win (Myintkyina prison) – NLD Township Organizer
57. Nine Nine (Insein prison) – NLD MP, Former Political Prisoner
58. Nu Nu Swe @ Pauk Pauk (female) (Myaungmya prison)
59. Nyi Nyi Min (Buthidaung prison) – NLD member
60. Nyo Mya (Kale prison) – NLD member
61. Pe Tin (Pegu prison) – NLD member
62. Pyae Phyo Aung (a) Hnan Mue (Pa-An prison)
63. San Pwint (Kale prison) – NLD member; teacher
64. San Ya (Tharawaddy prison) – NLD member
65. Sandar Min (a) Shwee, (Myaungmya prison) – 88 Generation Students, Former Political Prisoner
66. Sandar, (Female) (Myingyan prison) – NLD member
67. Saw Myo Min Hlaing @ James (Thaton prison) - Private Tutor
68. Saw Taw Kyi (Thayet prison) – Karen National Union member
69. Shin Sandaw Batha, Monk (Insein prison) – All Burma Monks’ Alliance
70. Shwe Thar (a) Tin Win (Tharawaddy prison) – Karen National Union member
71. Soe Han (Lashio prison) – lawyer; Chair of the National League for Democracy’s (NLD) legal advisory body
72. Soe Wai (a) Than Zaw (Myitkyina prison)
73. Than Min (a) Tin Tun Aung, (Taungoo prison) – NLD member
74. Than Than Htay, (Female) (Insein prison) – student
75. Than Than Sint, (Female) (Insein prison)
76. Than Tun (Shwebo prison)
77. Than Zaw Oo (Tharawaddy prison) – NLD member
78. Thar Cho, (Thayet prison) – NLD Township Organizer
79. Thein Zaw (Tharawaddy prison)
80. Thet Oo (Taungoo prison) – Human Rights Defenders and Promoters member
81. Thet Zin (a) Maung Zin (Kale prison) – journalist; former political prisoner; member of the All Burma Federation of Student Unions and the Democratic Party foraNew Society
82. Thin Min Soe, (Female) (Insein prison) – labour activist
83. Thura Win @ Thura Lin (Buthidaung) – Student
84. Tin Mar Swe (female) (Mandalay prison)
85. Tin Maung Nyunt (Shwebo prison) – NLD Township Organiser
86. Tin Mya (Insein prison) - National League for Democracy Township chairperson, Former Political Prisoner
87. Tin Myint (Insein prison) – NLD member
88. Tin Myint (Tharawaddy prison)
89. Tin Myo Htut (a) Kyaw Oo (Insein prison) – Generation Wave; former political prisoner
90. Tin Tin Myint, (Female) (Insein prison) – third year chemistry student
91. Tin Tun (a) Kyaw Swa (Tharawaddy prison) – UN Development Program staff (New Era journal distributor)
92. Tun Hla (Tharawaddy prison)
93. Tun Oo (a) Ngar Kalar (Taungoo prison)
94. Tun Tun Nyein, (Thayet prison) – NLD Youth member
95. Tun Tun Oo (a) Nanda Malar (Taungoo prison) – monk
96. Tun Tun Oo (Thandwe prison)
97. U Han Sein (Tharawaddy prison) – NLD member
98. U Myint, (Hinzada prison) , Human Rights Defenders and Promoters
99. U Pannita (a) Myint Aye (Taungoo prison) – monk; Human Rights Defenders and Promoters member
100. U Peter (Loikaw prison)
101. U Win, (Hinzada prison) , Human Rights Defenders and Promoters
102. U Zawana (a) Soe Myint (Taungoo prison) - monk
103. Win Myint (Insein prison)
104. Wunna Soe (Pa-An prison) – Democratic Party foraNew Society member
105. Yan Aung Shwe (Thayet prison) – All Burma Students Democratic Front member
106. Yan Naing Min (a) Nan Wai (Mandalay prison) – student
107. Zaw Htet Aung (Kale prison) - student
108. Zaw Lin Tun (a) Phu Zaw (Monywa prison) - All Burma Students Democratic Front (Western)
109. Zaw Tuhttp://www.blogger.com/img/blank.gifn (Taungoo prison)
110. Zin Mar Aung (female) (Mandalay prison) – student; NLD member
အဓမ္မတရားများဖယ်ရှားပြီး ဓမ္မအစားထိုးရေးလမ်းစဉ် ။..။...
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေ့ အခမ်းအနား ဓာတ်ပုံများ။..။(ဂျပန်န...
ဖိနပ်ပျံနှင့် ဥာဏ်ဝင်း(ခ)ဖိနပ် မိတ်ဆက်ပွဲ။။..။(VOA...
ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားနှင့်လူငယ်များ အစည...
ဖိနပ်ပျံဖြင့် အမေရိကားသို့ ရောက်လာကြသူနှစ်ဦး။...။...
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကြီး (၂) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နအဖ ဥက္ကဋ္ဌ ထံပေ...
အထက်ဗမာပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ လှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံတွေပါ။...
မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား၊ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမ အပေါင...
ဂျပန်နိုင်ငံ UN ရုံးရှေ့၌ ပြုလုပ်သော ရွှေဝါရောင်တော...
စက်တင်ဘာ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု ၂ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အထိ...
၂၅ရက်နေ့ မိုးမခသတင်းပါ မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သတ်၍ အရှင်...
Burma needs true democracy notajunta-sponsored s...
ရန်ကုန်မြို့ နယ်အချို့ ၌ သံဃာ့သွေး မြေကျခဲ့ရခြင်း ...
ဥဒါန်း ဘယ်ခါ ကြေအံ့နည်း။..။(၂နှစ်ပြည့် ရွှေဝါရောင်ေ...
" ဝ " တိုင်းရင်သားတို့၏ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော် ဓါ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ SANCTION နှင့်ပတ်သတ်၍ စဉ်းစား...
တရုတ်စီးပွားရေးသမားများ အထူးဒေသများမှနေ၍ တရုတ်နိုင...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာမှုနှင်...
စစ်အစိုး၏ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်မည်ဟု ပြောဆိ...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအားလုံး ချက်ချင်းလွတ်ပေးရန...
NEW YORK မှာကျင်းပတဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၂နှစ်ြ...
သာသနဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များ ...
ရွှေဝါရောင် ၂နှစ်ပြည့် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့် လေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်ရရန် အကျိုးဆောင် ...
အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် ( မြန်မာနိုင်ငံ ) ကျင်းပသ...
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကြီး (၂)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည...
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက်လမ...
ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက်လမ်...
နောက်ဆုံးရ လွတ်မြောက်လာသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၂...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တဖတ်သတ် တရားစွဲဆို ရုံးတင်စစ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျန်းမာရေး ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း...
ဧရာဝတီသတင်းဋ္ဌာနပါ သတင်းအား မွန်ပြည်သစ်ပါတီဖြေရှင်းခ...
ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၁၀စာရင်...
မြန်မာ့ရေနံ ဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းတွင် တရုတ်ပါဝင် ပတ်သ...
ဂျပန်ရောက်မြန်မာများသို့ ဆရာတော်ဦးထာဝရ သဝဏ်လွှာ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်မှု သတင်းများ။..။...
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့ကိယ်စားလှယ် အဖွဲ့မှ ...
ဒုတိယ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး (VOA သတင်း)
နောက်ဆုံးရ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်...
စစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းသည့် ၂၁နှစ်ပြည့် ဆန္ဒပြပွဲ ဓာတ်ပ...
၂၁ နှစ်မြောက် စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ အထိမ်းအမှတ်ဓါတ်ပံ...
ရန်ကုန်မှာ ကွဲခဲ့တဲ့ဗုံးတွေကို ဖောက်ခွဲကြောင်း ပြည...
သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများအား လျှောက်ထား တောင်းပ...
အင်အားကြီးမားသော ဗုဒ္ဓ၏ သံဃာအဖွဲ့အစည်း ။..။
စက်တင်ဘာ သံဃာလှုပ်ရှားမှု နှစ်ပတ်လည် မတိုင်မီ အဖမ်...
တစည၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မသမာခြေလှမ်းများ။…။
စစ်အာဏာသိမ်း နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဖိတ်ကြားစာ။...။
ဦးသုဝေ၊ အမျိုးသားရေးဦးဝင်းနိုင် တို့၏ ၂၀၁၀ ရွေးေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာမည့်၁၈ရက်နေ့ တရားခွင်တက်ရောက်...
လူယုတ်မာ ( သို့ ) မြန်မာစစ်အာဏာရှင်များ။...။(ဆောင်...
ဆရာတော်ဦးဝိစာရ ( သို့ ) သံဃာ့အခွင့်အရေးအတွက် အသက်...
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်အမှိုက်ပုံမှ မြန်မာ မိသားစုမျာ...
၁၃၇က် စက်တင်ဘာ VOICE OF BURMA စာစောင်။..။
ရပ်ကွက်ဥက္ကဌ ( ကြံ့ဖွတ်စည်းရုံးရေးမှုး ) ၏ စီးပွားရှ...
SNLD ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းဦး ၆၆ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အမှတ...
ဗိုလ်ချုပ်ဟာ သူတော်စင် အစစ်ပါ။...။
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာသံဃာလှုပ်ရှားမှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံနေရာ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒီမိုကရေစီ၏ သင်္ကေတ ဖြစ်သည် " ...
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အတွက် အမှတ်တရ ပိုစတာများ မဲေ...
နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်း၌ ရှိနေစဉ် လုံခြုံရေးများမှ စော...
The Washington Post သတင်းစာပါ ဘဘဦးဝင်းတင် ဆောင်းပ...
( ၇၀ ) နှစ်မြောက် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေ့အခမ်းအနား ( အိန...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့ ( အိန္ဒိယ ...
"ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံရေး အဖွဲ ...
The Arakan Naioanl Newspaper Vol.3 No.8 August, 20...
VOICE OF BURMA စာစောင်။..။